Hal arrin oo sababtay inuu Farmaajo ka baaqdo safar uu ku tagi lahaa Puntland - Caasimada Online
Home Warar Hal arrin oo sababtay inuu Farmaajo ka baaqdo safar uu ku tagi...
Hal arrin oo sababtay inuu Farmaajo ka baaqdo safar uu ku tagi lahaa Puntland
Muqdishlo (Caasimadda Onlin) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxmed C/llaahi Farmaajo ayaa la sheegay in uu dib u dhigay booqosho uu ku tagi lahaa deegaanada maamulka Puntland taas oo lagu wday in ay noqoto Maamaha soo socda.
Saraakiil ka tirsan Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in Arimaha ka soo cusboonaaday Puntland ay sabab u tahay dib u dhaca ku yimid booqasada Madaxweynaha uu ku tagi lahaa Magaalooyin ka tirsan Puntland.
Sida aan Wararka ku helnay Madaxtooyada Puntland ayaa Madaxweyne Farmaajo ka codsatay in safarkii uu ku imaan lahaa Puntland dib loo dhigo, waxaana sababta safarka dib loogu dhigay lagu sheegay isbadalka siyaasadeed ee ku yimid maamulkaasi oo Kalsoonida lagala noqday golihiisa Wasiirada.
Guddiga qaban qaabada Safraka Madaxweynaha Soomaaliya iyo soo dhaweynta ayaa u badnaa golihii Wasiirada Puntland ee lakala diray, waxaana hada joogsaday qaban qaabadii soo dhaweynta Madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxtooyada Puntland ayaa Madaxweynaha ka codsatay in booqashadiisa dib u dhigo ilaa inta ay ka dageyso siyaasada kacsan ee Puntland, lamana oga waqti uu Madaxweynaha Soomaaliya booqan doono deegaanada Puntland.
Warar kale oo aan la hubin ayaa soo sheegaya in ay socoto qorshe kale oo safarka Madaxweynaha loogu badalaayo Maamulka Hirshabeelle.